musha Asia Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yePro Wrestler ine zita rezita “Mambokadzi” uye mazita chaiwo Kanako Urai. Our Asuka Childhood Story uye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake nguva kusvika pane. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndomumwe wevakanakisa vechidzimba vechikadzi vane yepamusoro kuhwina muzana. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Asuka's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Asuka (christened Kanako Urai) akazvarwa pazuva re26th raGunyana 1981 kuOsaka Prefecture, muOsaka, Japan. Akazvarwa kuvabereki vechiJapan avo vanozivikanwa zvishoma nezve zvimwe kunze kwekuti vaive nezita rekuti Urai senge yavo yekuzivikanwa kwemhuri.
Jaya Asuka akarerwa nevabereki vake ku Osaka kwaakakurira ndokuita kuti ave mwana. Osaka inonyanya kuzivikanwa nekugadzirisa uye kuva nemisasa yekudzidzira yemitambo yemitambo semutambo uye munda, tennis, kushambira, marudzi emabhasikoro, rugby uye sumo. Saka zvakanga zvisingagoneki kuti Asuka asazokura achiita chero mimwe mitambo kunyanya pazvikoro zvekudzidzisa kwaakadzidza ku Osaka.
Asuka akakurira kuOsaka, guta rinozivikanwa zvakanyanya nemisasa yekudzidzisa zvemitambo, kuitisa zviitiko zvemumigwagwa nemumunda, kushambira uye sumo.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Nhoroondo yeAsuka inosanganisira kudzidza kwake kune yakazvimirira vasikana institution inonzi Osaka International Takii High Chikoro. Ndichiri pachikoro Asuka akatamba badminton nevolleyball iyo inozivikanwa pachikoro. Panguva yaakange ave mugiredhi rechitatu pachikoro chesekondari, Asuka akatanga kuda kwazvo kurwira kwevanhurume zvehunyanzvi uye nekunamatira vakunda vechiJapan panguva iyoyo kusanganisira Muto Keiji, Satoru Sayama (SAYAMA), Fujiwara Yoshiaki pakati pevamwe.
Muto Keiji ndomumwe wengano dzeJapan dzekurwa uyo Asuka akakurira achinamata.
Asuka akaudza vabereki vake nezve ake kufunga nezve basa mune yehunyanzvi kurwa netarisiro yekuti chishuwo chake chinotsigirwa. Zvisinei, sarudzo yemusikana mudiki yeramangwana basa yakasangana nekushorwa kwakasimba kubva kuvabereki vake. Kunyangwe zvakadaro, akachengeta zvido zvake mukurwira ari mupenyu panguva yese yedzidzo yake yechikoro chepamusoro uye zvidzidzo kuOsaka University of Arts Junior College.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Paakapedza kudzidza kuyunivhesiti, Asuka akashanda semugadziri wemifananidzo yekambani yekugadzira asati asiya mu2003 kunotora basa mukurwa. Kune avo, ivo vabereki vaAsuka havana kupokana nesarudzo yake asi vairemekedza pfungwa yake yekutungamira.
Asuka akatanga unyanzvi hwake hwekugadzirisa basa pamusana pekuzivikanwa kweAtoZ Kijapani kuduku kwaakatanga kuita musi waJune 16, 2004, ane zita rechitambo Kana. Akarwisana pakusimudzirwa kwemwedzi ye18 asati ashambadzira kurega kwake kubata basa achitaura chisingaperi chinephritis sechikonzero. Zvakakosha kucherechedza kuti chisingagumi nephritis ndiko kuputika kweIiyo nekuda kwehutachiona uye chepfu.
Kazhinji pikicha yeAsuka promo pikicha kubva pakutanga kwake kuAtoZ kusimudzira muna 2004.
Simuka kuburikidza nekukwidziridza:
Kunyange zvazvo iye ari kure nechende, Asuka akagadzira purogiramu yake yakajeka musangano asati adzokera kunowirirana mu2007, zvisinei kwete neAtoZ kukurudzira asi sa freelancer avo vakarwa nekuda kwekugadzira se Ice Ribbon, JWP Joshi Puroresu, NEO Japan Ladies Pro Wrestling, Pro Wrestling Wave uye Pro Wrestling Zero1, Reina Joshi Puroresu, uyewo Smash uye Wrestling New Classic pakati pe2007-2015.
Kubudirira kwake mukusimudzira kunosanganisira kuhwina JWP Openweight Championship, NEO Tag Team Championship, Reina World Women's Championship, Smash Diva Championship uye Wave Tag Team Championship.
Ndichiri kuSmash kusimudzira Ashuka akarwa neMurume.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
2015 raive gore iro Asuka rakasainwa kuWWE uye richiendeswa kunharaunda yaro yeNXT yekuvandudza. Ndichiri mundima iye akatora zita remudariro "Ashuka" uye akahwina kukunda mumutambo wake wekutanga wakanangana naDana.
Kwakazotevera kurwa mudunhu kwakaona Ashuka rekodhi inonakidza yekuhwina streak kupesana nevakadzi vazhinji varwi kusanganisira mukuru wevaridzi mutambi Cameron. Panguva yepamusoro yebasa rake reNXT, akakunda Bayley musi wa1 Kubvumbi 2016 kuhwina NXT Women's Championship. Akabata zita reiyo yakarebesa nguva munhoroondo yeWWE (mazuva 510) pamberi pekukuvara kwekoloni uye mavhiki masere ekudzora akamumanikidza kuti aregedze musi wa8 Nyamavhuvhu 24.
Asuka akabata zita revakadzi reNXT yenguva refu kwazvo munhoroondo yemakwikwi (mazuva 510) asati aregedza.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Ashuka akaramba asina kuzivikanwa kusvikira asayinirwa kuWAR brand paSeptember 2017. Akaita chikwata chake pachigamba nekukunda mukadzi wake wekare wepamberi Emma pamusi we 22nd waOctober.
Iye akazotevera akachengetedza kukunda kwake kunoshamisa kwemazuva 914 (kureba munhoroondo yeWWE) iyo yakazoguma nekukunda kuvhurwa kwevakadzi Royal Rumble Title. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Asuka akakunda kuvhurwa kwevakadzi Royal Rumble Title muna Ndira 2018.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Taura nezvehupenyu hwerudo rwaAsuka, haana kuroora uye hapana zvinyorwa zvehukama hwake hwekare. Ehe, iye wrestler ane zvigadzirwa zveakanaka zveAsia izvo zvinomuita anokwezva kune vangangove vakomana zvisinei, iye anoita kunge ari kutarisisa pabasa rake reWWE uye kumwe kubatsirana kuita kunze kwekurwa. Kunyangwe zvakadaro, isu tinokuchengeta iwe uchienderana nezviitiko mune izvi sezvazviri kuitika.
Akanaka Asuka haana kuroora uye haana hukama hwekare.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Ashuka achiri kutopa nyika nyika yepamhuri yake. Kunyangwe iye akambotaura nezvekukura nevabereki vake mubvunzurudzo uye hapana kutonga kunze kwekuti anokwanisa kuva nehanzvadzi nehanzvadzi pamwe nehanzvadzi dzehanzvadzi, uye vanamunini pahukuru.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Pane zvinhu zvinonakidza zvaunoda kuziva pamusoro paAsuka kunze kwemukati-inotyisa kutyisidzira uye kutarisa.
Kutanga, Asuka anoda mimhanzi yedombo uye mabhendi ake aanofarira ndiGuns N 'Roses, Aerosmith naBon Jovi.
Anoda mitambo yemavhidhiyo uye zvishuwo zvake zvinosanganisira mitambo yakaitwa EPIC, UBI Soft, EA uye Microsoft.
Asuka mutambi anofarira kunze kwekurwa.
Asuka anodawo mafirimu uye ndiye fan guru Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood, Kurosawa Akira uye Imamura Shohei.
Wrestler anobatanidzwa mukushingaira sezvaanopa mari kubva kune kambani yake Kana Kana Office kune vasina ruzivo.
Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Asati atanga nyanzvi yehutano hwekurwa mu2004, Asuka aive akazvimiririra maikirwo emagetsi uye mumwe wevadzidzi vemakambani akagadzira mifananidzo yemhando yakakurumbira yekutamba mitambo, Nintendo DS.
Asuka aive chikamu chechikwata chakagadzira mifananidzo yeNintendo DS.
Asuka akashandisa akawanda mazita epanzvimbo asati asaina neWWE. Mazita edanho anosanganisira Kana, Kana-Hime, Princess Kana, Ramen Woman, Dehenya Reaper Kana naTomoe Gozen. Zita rake reWWE rezita "Asuka" rine kukosha munhoroondo yeJapan. Inosanganisira mazwi maviri akapatsanurwa, 'Asu' uye 'Ka', iyo yekutanga inoshandura se 'kubhururuka' nepo yekupedzisira ichireva 'shiri'.
Asuka aive WWE Mukadzi Anokwikwidza wegore (2016, 2017) pamwe neAkwikwidzana Mukwikwidzi wegore 2017.
Ndiye mutori wenhau wemutambo wevhidhiyo uyo anowanzotora zvinyorwa zve XBOX 360 magazine. Iye, saka, anofarira kushandiswa kweMicrosoft.
Asuka ane yake yekumisidzana kusimudzira inonzi Kana Pro (yakagadzwa 2010). Uye zvakare, iye ane yake kambani inonzi Kana Hofisi. Iyo kambani inomhanya yake graphic dhizaini / mutambo wekusimudzira agency pamwe nebvudzi rake salon inonzi 'Rimwe Denga' kuYokohama, Japan.
Asuka Bvudzi Salon 'Rimwe Denga' iri paYokohama, Japan.
Akabudisa vana ma DVD. Izvo zvinodzidzisa kucherechedza kuti kunyoresa kusanganiswa kusingazivikanwi kwe softcore glamor photography nemavhidhiyo, kazhinji kuridza asi asi neS3xual overtones nguva yose.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Asuka Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- yeChikadzi WWE SUPERSTARS
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts